Abavelisi babahlengikazi | China Umzi-mveliso wabahlengikazi kunye nabaxhasi
Intengiso epheleleyo IV i-Cannula kunye ne-Injection Port
I-catheter ye-intravenous (IV cannula okanye i-catheter ye-venous catheter) yicatheter (ityhubhu encinci, eguqukayo) ibekwe kumthambo wendlela (ihlala ingalo yomguli okanye umlenze) ukulungiselela unyango okanye ulwelo. Emva kokufakwa, umgca ungasetyenziselwa ukutsala igazi.
Ixabiso leFektri ye-Silicone Foley Catheter ngeendlela ezi-3
I-catheter ye-Foley yindawo yokuhlala yokuchama. Ebizwa ngokuba nguFrederic Foley, ugqirha wotyando owaqala ukuyila i-catheter, i-Foley yityhubhu engenanto, eguqukayo efakwe kwisinyi ngokusebenzisa urethra. Kwizigulana ezingakwaziyo ukukhupha isinyi ngenxa yezizathu ezahlukeneyo ezibandakanya ukuba ne-anesthesia ngexesha lotyando okanye ingxaki yesinyi uqobo, i-catheter ye-foley ivumela umchamo ukuba ucofe ngokuqhubekayo.